09/18/13 ~ Myanmar Forward
ဆီးရီးယားစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်ပိုင်းလော့ကို သူပုန်တပ်များ ခေါင်းဖြတ်သတ်
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
Daily Mail သတင်းစာက ရဟတ်ယာဉ် အတွင်းမှ ပိုင်းလော့တစ်ဦးကို သူပုန်များက ဖမ်းဆီးပြီး ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြလာခဲ့သည်။
တူရကီ လေတပ်က ပစ်ချလိုက်သဖြင့် ပျက်ကျသွားသော ဆီးရီးယားစစ်ဘက် ရဟတ်ယာဉ်မှ ပိုင်းလော့ကို ဆီးရီးယား သူပုန်တပ်များက ခေါင်းဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုသီတင်းပတ် အစောပိုင်းက လေပိုင်နက် ကျူးကျော်လာမှုကို အတန်တန် သတိပေးနေသည့်ကြားမှ ရှေ့တိုးလာသည့် ဆီးရီးယား တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်ကို မိမိတို့ ပစ်ချခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းရဟတ်ယာဉ်သည် ဆီးရီးယားဘက်ခြမ်းတွင် ပျက်ကျသွားကြောင်း တူရကီက ကြေညာခဲ့သည်။ ဒေသတွင်း သတင်းဌာန အချို့က F-16 တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်း၏ ပစ်ချမှုကြောင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲကာ ပျက်ကျသွားသည့် ရဟတ်ယာဉ်ပုံကို ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ Daily Mail သတင်းစာက ရဟတ်ယာဉ် အတွင်းမှ ပိုင်းလော့တစ်ဦးကို သူပုန်များက ဖမ်းဆီးပြီး ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြလာခဲ့သည်။
ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားပြီး နာရီပိုင်းမျှ အကြာတွင် လေယာဉ်မှူး အဝတ်အစားနှင့် ဦးခေါင်းမဲ့ အလောင်းတစ်လောင်းကို စွန့်ပစ်ထားသော ဓာတ်ပုံများ ထွက်ပေါ်လာပြီး ယင်းနှင့် မနီးမဝေးတွင် ပိုင်းလော့၏ ဦးခေါင်းပြတ် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆီးရီးယား သူပုန်အဖွဲ့ထဲမှ တစ်ဦးဦးက ရိုက်ကူးထားသည်ဟု ယူဆရသော ဗီဒီယိုသည် အင်တာနက်ပေါ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် တူရကီလေတပ်က ပစ်ချခဲ့သည့် လေယာဉ်မှူး ဟုတ်မဟုတ် တိတိကျကျ အတည်ပြုရန် ခက်ခဲနေဆဲဟု သိရသည်။
Weasel Zippers ဝက်ဘ်ဆိုက်ကမူ လေယာဉ်မှူးကို သူပုန်များက ဖမ်းဆီးကာ ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟု အခိုင်အမာ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျသွားသည့် နေရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေသော်လည်း ဆီးရီးယားရှီ အယ်လ်အက်ရက်ဒ် တောင်တန်းများအနီးတွင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်းများက ရေးသားခဲ့သည်။ တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ် ရီဆက်တေယစ်ပ် အာဒိုဂန်ကမူ မိမိတို့ လေတပ်၏ လုပ်ရပ်ကို ကာကွယ် ပြောဆိုသွားသည်။ "ကျွန်တော်တို့ လေပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်လာတဲ့အတွက် လိုအပ်သလို လုပ်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဖက်နယ်နိမိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး"ဟု အာဒိုဂန်က ဆိုသည်။ ဆီးရီးယား စစ်တပ်ကလည်း တူရကီ၏ F-16 တိုက်လေယာဉ်များသည် မိမိတို့၏ ရဟတ်ယာဉ်ကို ပစ်ချခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး တူရကီ၏ လုပ်ရပ်သည် နှစ်နိုင်ငံကြား နယ်နိမိတ် ပြဿနာကို ပိုမိုတင်းမာအောင် ကြံဆောင်ခြင်းဟု စွပ်စွဲထားသည်။
တပ်မတော်ကြောင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ဘယ်လောက် ထိခိုက်ခဲ့သလဲ
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးလာခဲ့သော လက်ရှိအချိန်တွင် ၂၅% ပါဝင်နေသော တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ ဖယ်ရှားရေးသည်လည်း လူတိုင်းသည်းခြေကြိုက် ဖြစ်လာ နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပရောက် အင်အားစုများက ပိုမို၍ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောလာကြ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က “တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချသွားရမည်၊ လောလော ဆယ်တွင် တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ ရှိရမည်” ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့က “ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားနဲ့ မညီညွတ်တာတွေ ပြင်မယ်” ဟု ကြေညာထားရာ တပ်မတော်အမတ် (၂၅%)သည် ဒီမိုကရေစီသဘောတရားနှင့် မညီ၍ ဖယ်ရှားမည် ဟု ဆိုလိုဟန်တူပါသည်။ ယင်းယူဆချက်ကို ခိုင်မာစေရန် ထပ်လောင်းအတည်ပြုပေး လိုက်သည်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်တိုး၏ ပြောကြားချက် ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော်သားဟောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်တိုးက “တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြုတ်ကိုဖြုတ်ပစ်ရမယ်” ဟု ကြွေးကြော်သည်။ ထူးခြားလှသော မြင်ကွင်းမှာ တပ်မတော်နှင့်ပတ်သက် ၍ NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ သဘောထားရပ်တည်ချက် တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်နေသော အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် တပ်မတော် ပါသင့်/မပါသင့် နှင့် တပ်မတော် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မည်သည့်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသနည်း ဟူသောအချက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာရန် လိုအပ်လာပါ သည်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေသည် တပ်မတော်အုပ်ချုပ်စဉ်က ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့သော အခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါ သည်။ ထိုသို့ရေးဆွဲခဲ့ရာတွင်လည်း NLD အပါအဝင် အားလုံးပါဝင်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ခဲ့သော် လည်း အမျိုးသားညီလာခံမှ NLD နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ CRPP နှုတ်ထွက်ခြင်းတို့ဖြင့် အလွှာစုံ ပါဝင်မှု အား နည်းခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မူလအစ ဆွေးနွေးမှုများတွင် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုတွင် တပ်မတော်ပါဝင်ရေး မူအား NLD က လက်ခံခဲ့သည်ကို အထင်အရှားတွေ့ ရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ တပ်မတော် ပါဝင်ရေးမူအရ (၂၅%) ထိုင်ခုံနေရာများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ အမျိုးသားညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် တတ်သိပညာရှင်များ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စသည့် အစုအဖွဲ့အားလုံးက သဘောတူ လက်ခံခဲ့သော အချက်ဖြစ်ကြောင်း လည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်၏ ပါဝင်မှုကို အားလုံး စိတ်လို လက်ရ လက်ခံခဲ့ကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲများ မတိုင်မီ နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်တပ်၏အခန်းကဏ္ဍကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ခန့်မှန်းခဲ့ကြ သော်လည်း အကောင်းမြင်သူ လွန်စွာမှပင် နည်းပါးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယူနီဖောင်းဝတ် ၂၅% ကြောင့် လွှတ်တော်များ အရုပ်ဆိုးလေမလား၊ အကျည်းတန်လေမလား၊ ထိန်းချုပ်မှုမှ လွတ်ပါ မည်လား စသည်ဖြင့် စဉ်းစားတွေးတောခဲ့ကြပါသည်။ စာရေးသူတို့ကိုယ်တိုင် သည်လည်း စစ်တပ်နှင့် နိုင်ငံရေး လားလားမျှမဆိုင်၊ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်ထဲ မထိုင်သင့်ဟု တွေးထင်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် လည်း လက်တွေ့အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အရှိကို အရှိအတိုင်း သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ လွှတ်တော်ထဲ စစ်တပ်ဝင်ထိုင်နေခြင်း သည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအနာဂတ်နှင့် ကြီးမားစွာ ဆက်စပ်မှု ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ (၂)နှစ်ခွဲကျော် သက်တမ်းရှိလာပြီ ဖြစ်သည့် လွှတ်တော်ကို ပြန်လည်လေ့လာကြည့်လျှင် စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များက ကဖျက်ယဖျက် လုပ်ခဲ့ပါသလား တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ စစ်တပ်ကို အမွှမ်း တင်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ရေးသားတင်ပြလိုပါသည်။ လွှတ်တော်ထဲရောက် စစ်သားများကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခရီး နှောင့်နှေးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အချို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်ပင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များက ချက်နှင့် လက်နှင့် ထောက်ပြနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤအခြေခံဥပဒေသည် စစ်တပ်က ဦးဆောင်ရေးဆွဲ ခဲ့သော အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စစ်တပ်နှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာတွင် အားနည်း ခဲ့ရခြင်းကြောင့် စစ်တပ်ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့သော အခြေခံဥပဒေ အပေါ် ယုံကြည်မှု နည်းပါးနေခြင်း ဟု တွေ့ရှိရပါသည်။
ထပ်မံတွေ့ရှိရသည့် ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ စစ်တပ်သည် အခြေခံဥပဒေက ပေးအပ်ထားသည့် သူ့တာ ဝန်၊ သူ့အလုပ်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကို ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းက သတ်သတ်၊ အခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာရသည်က သတ်သတ် ကြည့်မြင်နိုင်ရန် လိုအပ် ပါသည်။ လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးမှုများ၊ ငြင်းခုန်မှုများတွင် တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် သူ့အလုပ် ကို သူ ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မြင်မိပါသည်။
ပထမဆုံးသော ဖြစ်စဉ်မှာ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်များ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(စ) အရ တပ်မတော်သည် အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အဓိက တာဝန်ရှိသည်နှင့်အညီ အခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် သဘောထားအမြင် အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်သည် သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေခြင်းဟု နားလည်ရန် အရေးကြီး ပါသည်။
ဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာ ခုံရုံးဥပဒေ၊ လွှတ်တော်ဥပဒေ အစရှိသည့် ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခဲ့စဉ်က ဖြစ်ပါ သည်။ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်နေသော ပြဌာန်းချက်များ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုကာ တပ်မတော်သား များက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်သည် သူ့တာဝန်ကို သူ အလေးအနက်ခံယူ ထမ်း ဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
တတိယဖြစ်စဉ်မှာ Right to Recall ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆိုင်းငံ့ရန် ဆွေးနွေးစဉ်က ဖြစ်ပါ သည်။ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်ခြင်း မပြုရန် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် များက ထောက်ပြသတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်တိုးနှင့် ဦးဘရှိန်တို့က မခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ချေပခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် များ၏ ထောက်ပြချက်များမှာ အကျိုးအကြောင်း များစွာ ခိုင်လုံနေ ပါသည်။ ဤသည်မှာလည်း တပ်မတော်သည် သူ့အလုပ်ကို သူ လူပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ထိုသို့ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်သည် လွှတ်တော် တွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်၏ သဘောထားအပေါ် ဆန်းစစ် လေ့လာကြည့်လျှင် အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်စေနိုင်သော၊ ကျော်လွန် ရာရောက်စေနိုင် သော၊ လျစ်လျူရှုရာရောက်စေနိုင်သော အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များတွင်သာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ကိစ္စရပ်များတွင် အခြားသော လွှတ်တော်အမတ်များနည်းတူ လိုက်လျောညီထွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
နောက်ထပ် ထူးခြားချက်မှာ တပ်မတော်သည် သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို အခြေခံဥပဒေအရလည်း ကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနည်းအရလည်းကောင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုများ ပြုခဲ့ရာတွင် ထွက်ပေါ်လာသောရလဒ် များကို လက်ခံခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မဲခွဲ၍ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း စောဒကတက်ခြင်း၊ ကဖျက် ယဖျက် ပြုခြင်း မပြုခဲ့ပါ။ အခြေခံဥပဒေက ပြဌာန်းထားသော ပြဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင် ရွက် ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ တပ်မတော်သည် အခြေခံဥပဒေကို အပြည့်အဝ လိုက် နာနေခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြေခံဥပဒေကို အပြည့်အဝလိုက်နာဆောင်ရွက်နေသည် မှာလည်း တပ်မတော် သာ ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(စ)၏ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုမှာ များစွာ ကျယ်ဝန်းလှပါသည်။ ချဲ့တွေးနိုင် လျှင် ချဲ့တွေးနိုင်သလောက် ကျယ်ပြန့်လှပါသည်။ အကယ်၍သာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကဖြစ်စေ၊ မဏ္ဍိုင်ကြီး တစ်ခုခုကဖြစ်စေ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်ရာရောက်ရှိစေသော ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက် များ ဆောင် ရွက်လာခဲ့လျှင်၊ ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားနေပြီ ဆိုလျှင် အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(စ)အရ တပ်မတော်က မည်သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပါမည်နည်း။ အခြေခံဥပဒေ ကျိုးပေါက်မှု မရှိစေရန်၊ အခြေခံဥပဒေ ယိမ်းယိုင်ခြင်း မရှိစေရန် အဓိကတာဝန်ရှိသော တပ်မတော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးနေပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်မတော်သည် ထောက်ပြခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်း စသည့် လွှတ်တော်တွင်း ရပ်တည်ချက်များဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်ကို အဆုံးတိုင် ဆောင်ရွက်မှု မပြုခဲ့သည်မှာ လည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အခြေအနေများကို ထောက်ချင့်၍ဟု မှန်းဆမိပါသည်။
ယနေ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်သော အခြေခံဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အတွက် ပေးအပ်ထား သော ကာလမှာ နည်းပါးလွန်းသည်ဟုလည်း ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကဲ့သို့ အရေးကြီး လှသော နိုင်ငံ့အုတ်မြစ်ကို ဤမျှသာ ပေးထားသော အချိန်ကာလဖြင့် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေသည် စင်းလုံးချောကောင်းချင်မှ ကောင်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း အချိန်ယူကာ ရေးဆွဲထားပြီး အလွှာစုံပါဝင်နိုင်စေရန် တတ်နိုင် သမျှ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုပါသည်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြ သူများက မိမိတို့အကျိုးစီးပွားဖြင့် အခြေခံဥပဒေကို လိုရာဆွဲအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ခြင်းများကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်နေရသည်က ပိုများနေပါသည်။ ဒီဘူတာပြန်ဆိုက်သည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း မတတ်နိုင်။ အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သော အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လွှတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးက မလိုက်နာ ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်သည် နှောင်းလူတို့ သင်ခန်းစာယူကြရမည့် သမိုင်းဝင် ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်လာနေပါ သည်။ ထို့ထက်ပို၍ ဆိုးသည်မှာ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်ရာရောက်နေသော ဥပဒပြင်ဆင်ချက် များကို လွှတ်တော်က ပြဌာန်းထားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံဥပဒေနှင့် မညီလျှင် လွှတ်တော်တွင်သာ တာဝန်ရှိသည် ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ထွန်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါသည်။ ထိုစကားအတိုင်း ပြန်ကောက်ရလျှင် ဦးမြင့်ထွန်း အပါ အဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွင် ထိုတာဝန် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ပြဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေ များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဦးဆောင်သော ကော်မရှင်အား တာဝန်ပေးအပ်ထားသည် ဟု သူရဦးရွှေမန်းက ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ပြဌာန်းထားရှိပြီး ဖြစ်သော ခုံရုံး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေများကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေများ၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ အစရှိသည့် ဥပဒေအချို့သည် အခြေခံ ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည် (သို့မဟုတ်) ကျော်လွန်နေသည် ဟု သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေများ ဖြစ် နေပါသည်။ ဦးနန္ဒကျော်စွာ၏ ကော်မရှင်သည် ထိုဥပဒေများကို ပထမဦးစားပေး ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်နေလျှင်၊ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်နေလျှင် အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ပြဌာန်းရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုပါက ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ အမြောက်အမြား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မှန်သမျှအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးမြင့်ထွန်း ပြောကြားထားသည့်အတိုင်း လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ရှိနေပြီ ဖြစ်ရာ အဆိုပါတာဝန်ကို လိုလိုလားလား ရယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။
ပြန်ကောက်ရလျှင် တပ်မတော်သည် အခြေခံဥပဒေကို အတိအကျ လိုက်နာနေသည့် တစ်ခုတည်း သော အင်စတီကျူးရှင်းကြီး ဖြစ်နေပါသည်။ တပ်မတော်၏ ရပ်တည်ချက်အားလုံးသည် အခြေခံဥပဒေ နှင့် အညီသာ ဖြစ်နေပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကို ကြိုက်ခြင်း၊ မကြိုက်ခြင်းက တစ်ပိုင်း၊ အခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာခြင်းက တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ပြီးချိန်၊ အသစ်ရေးဆွဲပြီးချိန် တွင်တော့ အဆိုပါပြင်ဆင် ချက်၊ အသစ်ပြဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်ရာရပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မပြင်နိုင်သေးချိန်၊ အသစ် မရေးဆွဲနိုင်သေးချိန်တွင် အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကြရပါလိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့် (၂)နှစ်ခွဲတွင် တပ်မတော်ကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ထိခိုက်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ဤသည်ကို တပ်မတော်နှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် လိုသော နိုင်ငံရေးသမားများ အသိအမှတ်ပြုကြရန် အရေးကြီး ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်လာမည့် အခြေအနေများတွင် တပ်မတော်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူ့တာကို ကျော်၍လည်း စည်းကျော်ခြင်းများ မရှိခဲ့ပါ။ ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဤသည်မှာ ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၏ အမှန်တရား ဖြစ်နေပါသည်။
တပ်မတော် ဘားတိုက်ပြန် ဟု ပြောကြားနေကြသူများအား မေးလိုပါသည်။ နံပါတ်တစ်မေးခွန်းမှာ လက်နက်ကိုင်စစ်ပွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလား။ နံပါတ်နှစ်မေးခွန်းမှာ တပ်မတော် နိုင်ငံရေး တွင် ဝင်ပါစရာ မလိုအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလား။ ပြည်တွင်း၌ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့မှ မရှိတော့ အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလား။ နံပါတ်သုံးမေးခွန်းမှာ တပ်မတော် လွှတ်တော်တွင်း က ထွက်သွားပြီ ဆိုလျှင် အားလုံး အောင်မြင်ပြီတဲ့လား။ ရှင်းအောင် ပြောရလျှင် လွှတ်တော်ထဲတွင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး မည် ဟု ကြွေးကြော်နေကြသူများ တိုင်းရင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကြပြီ ဆိုလျှင် တပ်မတော် ကို ဖယ်ထားလို့ ရနိုင်ပါမည်လား။ စဉ်းစားကြစေလိုပါသည်။ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအကြောင်းပဲ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး၊ အာဏာခွဲဝေမှုပဲ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး၊ သယံဇာတခွဲဝေမှု ပဲ ဆွေးနွေး ဆွေးနွေး တပ်မတော် မပါဘဲ မပြီးပြတ်နိုင်ပါ။ နောင်လည်း ပြန်ခေါ်ရမယ့်အတူတူ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မောင်းထုတ်နေကြပါသနည်း။ အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကို ကြည့်ပြီး ဖက်ဒရယ်ဟေ့ ဟု အော်ဟစ်ကြွေး ကြော်နေကြသူများ အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်သည် ကာလရှည်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်တွင် အသက်ပေါင်း များစွာ စတေးခဲ့ရပြီးမှ ယနေ့ ရင့်ကျက်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ကို သတိပြုကြစေလိုသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲများ မတိုင်မီက များစွာ ဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ တပ်မတော်က ဂါဒီယန် အနေဖြင့် ပါဝင်နေသော ဒီမိုကရေစီ ကောင်းမည် မဟုတ်ဟုလည်း ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ ယခု အခါ (၂)နှစ်ခွဲကျော်လွန်လာခဲ့ချိန်၌ တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံရေး ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရာတွင် မဏ္ဍိုင်ကြီးများ အနက် တပ်မတော်သည် ပေးအပ်ထားသော ကတိကဝတ်နှင့်အညီ တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက် နေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း တပ်မတော်သည်လည်း အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဖြတ်သန်းနေရခြင်း ဖြစ်သည်ကို နားလည်သတိပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
တပ်မတော်၏ တာဝန်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ တပ်မတော်သားများ လွှတ်တော်တွင် ဝင်ထိုင်နေခြင်းမှာ အထိန်းအထေသဘော ဝင်ထိုင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုက်ချင် ကြိုက်၊ မကြိုက်ချင်နေ ထိုသို့ ဝင်ထိုင်နေခြင်းမှာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ တပ်မတော်သားများ လွှတ်တော်တွင်းမှ အခု အကုန်ထွက် ဟူ၍ ပြောနေကြသော နိုင်ငံရေးသမားများ အမြင်ကျယ်ကြဖို့လိုပါသည်။ ဦးနှောက်သုံးကြဖို့ လိုပါသည်။ လက်တွေ့ကျဖို့ လိုပါသည်။ တပ်မတော် သားများ လွှတ်တော်တွင်းမှ မည်သည့်အချိန်တွင် ထွက်ခွါရမည် ဟူသည်ကို လက်ရှိဆောင်ရွက် နေမှုများက အဆုံးအဖြတ် ပေးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာကြဖို့ လိုအပ် သလို အထိန်းအထေအားဖြင့် ထည့်သွင်းထားသော တပ်မတော်၏ ထိန်းကျောင်းမှုကို ကြည်ကြည် ဖြူဖြူ ခံနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားထားသည့် စကားတစ်ခွန်း ရှိပါသည်။ “ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်ရဲ့ သက်တမ်းဟာ တပ်မတော် ဆန္ဒရှိသလောက်ပဲ နေရမှာပါ” ဟူသော စကား ဖြစ်ပါသည်။ ဤစကား သည် အဓိပ္ပါယ်များစွာ ရှိပါသည်။
The Messenger ဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၇)မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
ညဥ့်သန်းခေါင်ယံအချိန်၊ တစ်ရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေသော်လည်း ရွာတွင်အိပ်ပျော်နိုင်သူမရှိ။ ဧရာဝတီမြစ်ရေ၏ ကမ်းပါးများကို တိုက်စားနေသည့်အသံက ဦးလှအေးတို့မိသားစုမြေနေရာကို ၀ါးမျိုတိုက်စ...ားရန် ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
ရေးသားသူ- မိုးကျော်၊ ခန့်ထက်
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under သတင်းများ | No comments
Necessity is the Mother of Invention ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်းပါပဲ။ လိုအပ်ချက်ကြောင့် တကယ်ပဲ ကမ္ဘာကျော် တီထွင်ပညာရှင် ဖြစ်သွားသူ ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ နန်ကျင်းပြည်နယ်က အမျိုးသား တစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို မီဒီယာတွေစိတ်ဝင်စားလာပြီး အာရုံထားလာတဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့မနေနိုင်တော့ပဲဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေ ထောက်ပံ့လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဖန်တီးတဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာ ကျောက်ကပ် မှ ရေ ထုတ်စက်၊ ရေသွင်း၊ သွေးသွင်းစက် - Dialysis ကို စံဥပမာ ထားလို့ ကမ္ဘာ့ဈေးအသက်သာဆုံး Dialysis စက်တစ်လုံးကို ဖန်တီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ဝါရှင်တန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈။
ကုလသမဂ္ဂ၏ဓာတုလက်နက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်ကျသည့် အစီရင်ခံစာသည် သမ္မတဘာရှာ အယ်အာဆတ် အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာအမြင်ကိုပြန်လည်ပုံဖော်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမားက ယမန်နေ့ကပြောကြားသည်။
အိုဘားမားက တနင်္လာနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာသည် အပြစ်တင်စကား တိုက်ရိုက် မပြောကြားထားသော်လည်း သြဂုတ် ၂၁ ရက်နေ့က လူပေါင်း ၁၄၀၀ သေဆုံးစေခဲ့သောတိုက်ခိုက်မှုတွင် ၎င်းတို့အစိုးရ ပြောကြားချက်တိုင်းကို သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဒမတ်စကတ်စ် ဆင်ခြေဖုံးမှ နမူနာများ၊ သက်သေများကို စုဆောင်းခဲ့ကြသည့် ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ အစီရင်ခံစာကို အာဆတ်အစိုးရအား တုံ့ပြန်မည့် ခိုင်မာသော လုပ်ဆောင်ချက်များ လုပ်ဆောင်ရန် အမေရိကန်၏ တချို့သော မဟာမိတ်များ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက ဓာတုလက်နှက် သုံးခဲ့ပါတယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီးပါပြီ” ဟု စပိန်ဘာသာ စကားပြော ရုပ်သံ တယ်လီမန်ဒိုနက်ဝတ် သို့ သမ္မတက ပြောကြားသည်။
“သူတို့မှာပါတဲ့သက်သေတွေရဲ့အသေးစိတ် အချက်တွေကို ခင်ဗျားတို့ ကြည့်တဲ့အခါ အခြားသူသုံးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရတပ်သုံးခဲ့တာပဲဆိုတာ ဖုံးလို့မရဘူး”
“ကျွန်တော် တွေးမိတာတော့ နိုင်ငံတကာ တုံ့ပြန်မှု ပြောင်းလဲခြင်းပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲသွားတယ်”ဟု အိုဘားမားက ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ အမေရိကန်သည် ရုရှားနှင့်အပြင် ဆီးရီးယားအစိုးရနှင့်လည်း တိုက်ရိုက် မဟုတ်ဘဲ ဓာတုလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အတွင်း ပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတ အာဆတ်ကို အာဏာမှ ဖယ်ရှားရမည်ဆိုသည့် ၎င်း၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ဓာတုလက်နက်ကို ဘယ်သူမှ မသုံးဖြစ်အောင် အဲဒီလက်နက်တွေကို ထုတ်ပစ်တာ သေချာအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တသမတ်ဦးတည်ချက်ပါ”ဟု အိုဘားမားက ပြောကြားသည်။
သေဒဏ်ချမှတ်မှု အစ္စလာမ်မစ် ဆန္ဒပြ
စစ်ရာဇဝတ်မှုကြောင့် သေဒဏ်တိုးမြှင့် ကျခံရသူ
အစ္စလာမ်မစ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် မိုလာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံရေးသမား Abdul Quader Mollah ကို သေဒဏ် ချမှတ်ခဲ့အပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ နိုင်ငံတဝန်းက မြို့ကြီး မြို့ငယ်တွေမှာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး အစ္စလာမ်မစ် ပါတီဖြစ်တဲ့ Jamaat-e-Islami ပါတီက နိုင်ငံတဝန်း သပိတ်မှောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတည် မငြိမ်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လုံခြုံရေးတွေကိုလည်း တိုးချထားပါတယ်။
တချို့ နေရာတွေမှာ ရော်ဘာ ကျည်ဆန်တွေ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေကို သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေက ခဲနဲ့ ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် လူတစ်ယောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်က ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ကာလ အတွင်း ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ အတွက် အစ္စလာမ်မစ် ခေါင်းဆောင် Abdul Quader Mollah ကို သေဒဏ် ချမှတ်ခဲ့မှု အပေါ် သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေက မကျေမနပ် ကန့်ကွက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဆိုင်အချို့ ညစ်ညမ်းကားများ အလွယ်တကူကြည့်နိုင်အောင် စီစဉ်၍ သုံးစွဲသူလျော့ကျလာမှုကို ဆွဲဆောင်မြှင့်တင်လာ
ဗြိတိန်မှ မင်္ဂလာမောင်နှံအတွက် အမှတ်ရစရာ ဖန်တီးပေးခဲ့သည့် ဘရတ်ပစ်တ်
တနင်္ဂနွေနေ့က သတို့သမီး အဘီလင်းဝုဒ်နှင့် သတို့သားဒန်နီရယ်လ်လင်းဝုဒ်တို့၏မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပသည့် ဘက်ကင်ဟမ်ရှိုင်းယားရှိ စတုတ်ခ်ပါ့ခ် ဟိုတယ်တွင် ဟောလီးဝုဒ် ဇာတ်ဆောင် မင်းသားက တည်းခိုနေရာ အဘီတို့ နှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ မင်္ဂလာ ဇနီးမောင်နှံ အသစ်စက်စက် နှစ်ဦးအတွက် ဘရတ်ပစ်တ်က အမှတ်ရစရာ အခိုက်အတန့်တစ်ခု ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့က သတို့သမီး အဘီလင်းဝုဒ်သည် သူမ၏ ခင်ပွန်း ဒန်နီရယ်လ်လင်းဝုဒ်နှင့် မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပသည့် ဘက်ကင်ဟမ်ရှိုင်းယားရှိ စတုတ်ခ်ပါ့ခ် ဟိုတယ်တွင် ဟောလီးဝုဒ် ဇာတ်ဆောင် မင်းသားက တည်းခိုနေရာ အဘီတို့ နှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်တွင် Furyဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရန် ရောက်ရှိနေသည့် ပစ်တ်သည် ဟိုတယ်အတွင်းရှိ ဘားခန်းထဲတွင် ခေတ္တရှိနေပြီး အဘီက သူမတို့ကို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရန် သွားရောက် ပန်ကြားခဲ့သည်။
အဘီက "ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက ဘားထဲမှာ ပစ်တ်ရောက်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်မက မယုံဘူး။ သူက ကျွန်မကို ဆွဲခေါ်သွားတော့တာပဲ။ ပထမတော့ ကျွန်မက သူလာနောက်နေတယ် ထင်တာလေ"ဟု ဆိုသည်။ အဘီသည် World War Zစတား မင်းသား၏ အမာခံ ပရိသတ် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူမက ပစ်တ်သည် စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပင် သူမတို့နှင့်အတူ ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံပေးခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ "သူက ကျွန်မတို့ကို ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်း ပြောတယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ သူပါဝင်ရလို့ ကျေနပ်တဲ့ အကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ ပစ်တ်ဟာ တကယ့်လူကောင်းပါ။ သိပ်ကို လူကြီးလူကောင်း ဆန်ပါတယ်"ဟု အဘီက ချီးကျူးခဲ့သည်။ သူမက ဆက်လက်၍ "ပစ်တ်က အလုပ်ကိစ္စ ရှိပုံရတယ်။ နောက်တော့ မိန်းကလေးတွေက သူ့ဆီ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ရောက်လာတော့ သူတို့အဖွဲ့ အပေါ်ထပ် တက်သွားတယ်။ ကြည့်ရတာ တစ်ခုခု ဆွေးနွေးနေပုံ ရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ အမှတ်ရစရာလေး ပိုဖြစ်သွားတာပေါ့"ဟုလည်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ဒိန်ချက် အမက(လွန်)မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ KIA အရာရှိတစ်ဦး၏ အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုခံရ
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃
မချမ်းဘောမြို့နယ် ဒိန်ချက်ကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမ(၆)ဦးအား စက်တင် ဘာ(၁၆)ရက် ည ၉ နာရီချိန်ခန့်တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)အရာရှိ တစ်ဦးမှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ကာ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းဒေသခံအချို့ထံမှ သတင်းရရှိသည်။
“ဒီကျောင်းမှာ ဆရာ ၄ ယောက်နဲ့ ဆရာမ ၂ ယောက် စုစုပေါင်း(၆)ယောက် ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက် လောက်က ဟိုဘက်ရွာကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လာခေါ်သွားတာတွေ့တယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေ လည်း ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ လိုက်သွားသွားကြရတာပေါ့။ ည ၉ နာရီလောက်လာ ခေါ်သွားတာ ၁၂ နာရီ လောက်မှာ ပြန်ရောက်လာကြတယ်” ဟု ယင်းရွာသားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
စက်တင်ဘာ(၁၆)ရက်နေ့က ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)၊ တပ်မဟာ(၁)၊ တပ်ရင်း(၇)မှ ဗက တန်ဂွန်းဦးစီးအဖွဲ့သည် မချမ်းဘောမြို့နယ် အင်ဂါဒိန်ဆာ ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ရ၀မ်အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦး၏ နေအိမ်၌ ခေတ္တတည်းခိုခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းနေအိမ်၌ ဒိန်ချက် အမက(လွန်)မှ ဆရာ၊ ဆရာမ(၆)ဦးအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ရင်းနှီးသော ရွာသားတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ KIA အရာရှိ ဗိုလ်ကြီး တန်ဂွန်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအား ပညာရေးနှင့် စစ်ရေးပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ဆက်လုပ်ဖို့လိုကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို အစိုးရစစ်ကြောင်းများအား သတင်းပေးပါက ကျောင်းကို မီးရှို့ပစ်ပြီး လူတွေကိုပါ သတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မချမ်းဘောမြို့နယ် အင်ခါဂါးကျေးရွာအနီးတွင် သြဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့က KIA နှင့် နယ်မြေခံတပ်မတော်စစ် ကြောင်းတို့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးအား KIA အဖွဲ့မှ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည်ဟု သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေ၍ ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ အသက်အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်နေကြရကြောင်း၊ KIA ခေါင်းဆောင်မှ ယခုကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ လုံခြုံရေးအာမခံချက် မရှိ သောကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခွင့်တင်လိုကြကြောင်း ပြောင်းရွှေ့ခွင့် မရပါက နုတ်ထွက်ခွင့်တင်ရန် စီစဉ်နေကြ ကြောင်း ယင်းဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် နီးစပ်သော အမည်မဖော်လိုသူ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆေးလိပ် နှင့် ဆေးရွက်ကြီး ဥပဒေ အသက်ဝင်စေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးစဉ်၎င်းက ယင်းသို့ ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စတင်ဖမ်းဆီးမည့် ရက်ကိုမူ အသေးစိတ် ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပေ။
ဆေးလိပ်များကို အလိပ်လိုက် ရောင်းဝယ်နေမှု များသည် ဆေးလိပ်၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များကို ပိုမို ကျယ်ပြန့် လာစေသောကြောင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းက ဆိုသည်။ "အလိပ်လိုက်ရတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ တွေ့တဲ့နေရာမှာ သောက်နေကြပါတယ်" ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ဆေးလိပ်ရောင်းဝယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အတွက် အဓိကကျသော အနာဂတ်လူငယ် များအတွက် ကောင်းမွန်သော အလားအလာများ ရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကင်းမြို့ နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းကျော်က ပြောကြားသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများ စုတွင် ဆေးလိပ် အလိပ်လိုက် ရောင်းချခြင်းမရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ချင်း ရောင်း ဝယ်မှု ပြုလုပ်နေကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။
"ရောင်းတဲ့သူ ကတော့ ရောင်းမှာပဲ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ ထိန်းချုပ်ချင်ရင် အစိုးရရဲ့ ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏီ တွေ လိုင်စင်ချ ပေးမှုကို ပြင်သင့်တယ်" ဟု ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် စီးကရက် အမျိုးမျိုး ရောင်းချသူ တစ်ဦးကဆိုသည်။
ယင်းသို့ ဆေးလိပ်တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ချင်း ရောင်းဝယ်မှုကို တားဆီးခြင်း၊ အများပိုင်ဧရိယာ များတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်း အပြင် ဆေး၊ ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက် ကြီး သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အခွန်စနစ် နှင့် ဆေးလိပ်ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ များကို အခွန်မြှင့်တင်ခြင်း ပြုလုပ်မှသာ ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်ရာ ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင် များက သုံးသပ်ကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကင်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းကျော်က ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး ဥပဒေ အသက်ဝင်စေရေး ပြည်နယ်အစိုးရက အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်း ကြောင်း အဆိုတင် သွင်းခဲ့ခြင်း အပေါ် ယင်းသို့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ချင်း ရောင်းချသူများကို ပထမကြိမ် ဖမ်းဆီးရမိပါက ငွေဒဏ် ကျပ်တစ်သောင်းမှ ကျပ်သုံး သောင်းအထိ အပြစ်ပေးနိုင်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ဖမ်းဆီးမိပါက ငွေဒဏ် ကျပ်သုံးသောင်းမှ ကျပ် တစ်သိန်း အထိ အရေးယူနိုင်ကြောင်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး ထွက်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေတွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းချနေသည့် စီးကရက်ဘူးများတွင် အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသူများ ရောင်းချခြင်း မပြုရ၊ စီးကရက် သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြ ထားသော်လည်း ယင်းအပေါ်ရောင်းချသူများ ရော၊ သောက်သုံးသူများပါ အလေးအနက် ထားခြင်း မရှိသဖြင့် ထိရောက်ခြင်း မရှိပေ။
ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက် ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေတွင် အသက်၁၈ နှစ် မပြည့်သူများကို ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများ အနီးတွင် ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်း၊ အခွန်ဆောင်ထားသည့် အမှတ်အသား မပါဝင်သော ဆေးလိပ်များကို ရောင်းချခြင်း၊ အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သောသူ များကို မရောင်းရဟူသည့် သတိပေး စာသား မပါသောဆေးလိပ်များ ရောင်းချခြင်းတို့ကို ပထမအကြိမ် ဖမ်းဆီး ရမိပါက ငွေဒဏ် ကျပ်တစ်သောင်းမှ ကျပ် သုံးသောင်းအထိ အရေးယူနိုင်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ဖမ်းဆီးရမိပါ က ငွေဒဏ် ကျပ်သုံးသောင်းမှ ကျပ်တစ်သိန်းအထိ အပြစ်ပေး အရေးယူနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ လက်ထက် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကတည်းက ထုတ်ပြန် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက် ပစ္စည်း ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ အသက်ဝင်စေရန် အစိုးရက ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန် အစည်း အဝေး တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြား ထားသည်။
ကျွန်မတို့လို မိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်တယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.....
ပထမဆုံးက အဖြေရကျပ်ဆို နှာချေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် သမ်းဝေတာနဲ့ နှိုင်းလိုက်ရင် အဖြေရကျပ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းသွားမှာပါ။ နှာချေချင်တဲ့အခါ ဟတ်ချိုးလို့ ချေလိုက်ရချိန်မှာ ဘယ်လို ခံစားရလဲလို့ မေးရင် ဘယ်သူ ဖြေနိုင်မလဲ။ ကိုယ်ခန္ဒာမှာ အဲဒီ့အချိန် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ၊ ဘာလဲ၊ နှာချေတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဖြေကြည့်စေ ချင်ပါတယ်။ လူတိုင်း ချေဖူးပေမယ့် နှာချေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလေးပါလို့ အင်မတန် အပြောရ ခက်ပါ တယ်။ သမ်းလိုက်တာလည်း အတူတူပါပဲ။ ပါးစပ်ကို အားရပါးရ ဟပြီး ၀ါးခနဲ သမ်းလိုက်တာတော့ မှန်တယ်။ အဲဒါ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို ခံစားရလဲဆိုတာ အလွန် အဖြေရခက်လှပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပြီးတယ်ဆိုတာလည်း အလားတူပါပဲ၊ အဖြေရ ကျပ်လှပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အနောက်တိုင်း သုတေသနများအရ အမျိုးသမီး ၂၅ % သာလျှင် ချစ်တင်းနှောရင်း (၀ါ) လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားကျတော့ ၉၀ % ကျော်ဖြစ်နေတာနဲ့ကို ဒါဟာ အင်မတိ အင်မတန် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ကြုံခဲ့ဖူးတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အသက် ၆၀ ကျော် မိတ်ဆွေသစ်တစ်ဦးနဲ့ ခရီးအတူ သွားဖြစ်ကြရင်း ရင်းနှီးလာလို့ သည်ကိစ္စတွေ ပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါ သူက အမျိုးသမီးတွေ မပြီးဘူးလားလို့ တအံ့တသြ မေးလာပါတယ်။ တကယ်တော့ သူဟာ မြေးရနေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးသုံးယောက် ဖခင်ပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို မေးမိတယ်။ “ဘာလဲ အစ်ကိုကြီးက အစ်ကိုကြီး မိန်းမကို ပြီးလားလို့ မေးတတ်တယ် မဟုတ်လား”ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်လို့ သူက ဖြေပါတယ်။ ဒါနဲ့ “ဟိုကလည်း ခေါင်းညိတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြီးတယ်လို့ ပြောတာချည်းပဲ မဟုတ်လား”ဆိုတော့ သူက ဟုတ်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ တအား ရယ်ချင် သွားပေမယ့် သူ့ကိုရော သူ့မိန်းမ အမယ်ကြီးကိုပါ သနားမိသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာက သည်လို အကြောင်းအရာတွေကို လူသိရှင်ကြား ချပြဆွေးနွေးလို့ မရတာမို့ အများစုဟာ ထင်တစ်လုံးနဲ့ ရမ်းကြိတ် နေကြပါတယ်။ သူလို အမျိုးသားတွေက ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၉၀ % မက ရှိနေမှာလည်း အသေ အချာပါပဲ။
ပထမဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှု မစတင်ခင် အပျိုးကာလက အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသား တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ အမျိုးသားတွေကတော့ “ဆင်လိုက်တုန်းတောင် ငယ်ပါတင်းနိုင်ကြသူများ”ဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေက ဆင်လိုက်တာ ဝေးစွ၊ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ကြောင့်ကြနေမိတာနဲ့ လိင်စိတ်နိုးကြားဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာနေပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ မိသားစု ကိစ္စတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေက လွှမ်းမိုးထားစမြဲပါ။ ဒါ့ကြောင့် အပျိုးကာလနဲ့ သူတို့ကို စိတ်ပြောင်းအောင် လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အပျိုးမှာ အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးက လင်ကိုမယား စိတ်လက် ကြည်ကြည်သာသာနဲ့ ကြည်ကြည် နူးနူး ရှိအောင် လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လက်ကလေး ကိုင်တာ၊ ပါးကလေးနမ်းတာ၊ ဆံပင်ကလေး နမ်းတာ လေးတွေဟာ တကယ့် အပျိုးပါပဲ။ အိမ်ထောင်သက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပဲ ရှိနေနေ မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင် ရမယ့်အထဲမှာ အဲဒါတွေ ပါပါတယ်။
အဲဒီ့ကမှတစ်ဆင့် အရှိန်လေး နည်းနည်း ရပြီဆိုရင် ပြင်သစ်အနမ်း၊ အနမ်းစို စသဖြင့် ခေါ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတာက ဆက်လာရပါတော့မယ်။ သည်မှာလည်း လင်ရယ် မယားရယ်ဖြစ်လာမှတော့ တစ်ယောက် တစ်ယောက် ရွံနေလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ အမျိုးသမီးအတော်များများက အဲဒီ့အနမ်းကို မတုံ့ ပြန်တတ်ဘူး။ ရွံ့နေတတ်တယ်။ အဲတော့ အမျိုးသားက သင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသားကလည်း တတ်ဖို့ လိုတာပေါ့ဗျာ။ ပြင်သစ်အနမ်း ဋီကာကို နောက်ကျတော့မှ တစ်ပုဒ် သတ်သတ် ရေးပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား။
အဲဒီ့အဆင့်ကနေ နောက်တစ်ဆင့် တက်ရာမှာလည်း မလောရပါဘူး။ ယောက်ျားအများစု မှားတတ်တဲ့ အမှားက နမ်းရင်းနဲ့ သူ့လက်ကြီးက အမျိုးသမီးရဲ့ ရင်သားဆီ တန်းရောက်သွားတတ်တာပဲ။ ဟား… အလွဲကြီး ခင်ဗျ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာမှာ အာရုံနိုးတဲ့နေရာတွေ များစွာ ရှိပေမယ့် ရင်သားကို တန်းသွားတာကြီးက နေရာမကျဘူးခင်ဗျ။ ဖက်ထားရင်းကနေ လက်မောင်းလေး ပွတ်၊ ကျောလေးပွတ် လုပ်ရတယ်။ ရင်ခုန် လာအောင် နှူးရတယ်။ သူ့လက်ကြီးက ငါ့ရင်သားဆီ ရောက်လာတော့မှာ… ဟော… ရောက်တော့မယ်… ဟင်… ဟုတ်လဲ ဟုဘ်ဘူး… အဲဒီ့ ရွှေလက်က ဘယ်ရောက်သွားရပြန်တာလဲ မောင်ရယ်… ဟင့်… ဆိုတာ မျိုး ဖြစ်လာအောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် လုပ်နိုင်လေ အခြေအနေ ကောင်းလေလေပါပဲ။
အဲဒီ့ကမှ အရှိန်လေး တော်တော်ရပြီဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းကို နေရာ ရွှေ့လို့ ရပါပြီ။ သည်နေရာမှာ ပစ်မှတ်က ချိုလုံးတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒါကိုလည်း အလောတကြီး မဟုတ်ဘဲ သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ လေး လုပ်ပေးတတ်ဖို့ လိုပြန်ပါတယ်။ လုပ်တတ်ရင် အမျိုးသမီးဘက်က အတော့်ကို အဆင်သင့် ဖြစ်လာ ပါပြီ။
ပါးစပ်က နေရာရွေ့သွားတော့ လက်က အားနေတယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲလို့ မေးရင် အဖြေရှိပါတယ်။ လက်က ဗိုက်သား၊ ဆီးခုံ၊ ပေါင်၊ ဒူး စတာတွေကို ညင်သာစွာ ထိတွေ့ပေးနေနိုင်ပါတယ်။ သည်မှာလည်း ဦးတည် ချက်က ယောနိဖြစ်ပေမယ့် ရင်သားမှာတုန်းကလိုပဲ အမျိုးသမီးက အလိုချင် အတောင့်တဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ရစ်သီ ရစ်သီနဲ့ အရစ်ရှည်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေပါ။ တကယ်လို့ အဲဒီ့နေရာကို လက်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ပါးစပ်နဲ့ပဲ စခန်းသွားလိုသေးတယ်ဆိုရင်လည်း လက်က ယောနိကလွဲလို့ ခါးအောက်ပိုင်း ကျန်တဲ့ နေရာအနှံ့ကို ထိတွေ့ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ အပျိုးကာလပါပဲ။ အတွေ့အကြုံ နည်းသူ အမျိုးသမီးများအတွက် အဲဒီ့ အပျိုးကာလဟာ နာရီဝက် ၄၅ မိနစ်လောက် အချိန်ယူဖို့ လိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ရင့်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အပျိုးကို အဖျင်းဆုံး မိနစ် ၂၀ လောက် အချိန်ယူရပါမယ်။ ကြာလေ၊ အချိန်ဆွဲနိုင်လေ၊ အမျိုးသမီးအတွက် အရှိန်တက်လေပါ။
အဲလို အရှိန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသမီးဟာ မသိမသာလေး နွေးလာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဆန္ဒတွေ တက်ကြွလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုယ်ခန္ဒာက သွေးတွေကလည်း ယောနိနဲ့ ယောနိထိပ်က အကြောဆိုင် အဖု အထုံး (အစေ့လေး)ဆီကို တိုးနေပါပြီ။ သည်အချိန်မှာ ယောနိအတွင်းပိုင်းနံရံကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချွေးသီး ချွေးပေါက်များကျသလို စိမ့်ရာက နစ်လာပါတော့မယ်။ သည်အချိန်မှာမှ လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်ရ တော့မှာပါ။
အဲလိုနဲ့ အာရုံက ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ သွေးက တင်ပါးဆုံရိုးတ၀ိုက်မှာ ဆက်ပြီး တိုးနေ ပါတယ်။ အသက်ရှူလည်း ပြင်းလာတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း တက်လာပါပြီ။ ယောနိရဲ့ အတွင်းပိုင်းကလဲ ငယ်ပါကို ဆုပ်ညှစ်ဖို့အတွက် ကျဉ်းသွားသလို အပြင်ပိုင်းကကျပြန်တော့ ငယ်ပါကို ကြိုဆိုဖို့အတွက် ကျယ် လာပါတယ်။
အဲသလို ပြီးလိုက်ချိန်မှာ သားအိမ်၊ ယောနိနဲ့ စအိုတို့က ၀.၈ စက္ကန့်မှာ တစ်ကြိမ်နှုန်းလောက်နဲ့ ကြုံ့ကြုံ့ သွားပါလိမ့်မယ်။ သိပ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြီးတာ မဟုတ်ဘဲ တော်ရုံပြီးတာဆိုရင် အဲလို ကြုံ့တာက သုံးကြိမ်မှ ငါးကြိမ်လောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အပြင်းထန်ဆုံး ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀ ကြိမ်မှ ၁၅ ကြိမ် အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ပြီးတာ အစစ်ပါ။
အဲလို ပြီးခြင်းဟာ အစေ့ကို တိုက်ရိုက် လှုံ့ဆော်လို့သော်လည်းကောင်း၊ ယောနိကို လှုံ့ဆော်လို့ သော်လည်း ကောင်း၊ နှစ်ခုလုံး ပေါင်းရုံးထားတဲ့ အပေါ်မှာသော်လည်းကောင်း မူတည်နေတတ်သလို အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း မတူပါဘူး။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အရဆိုရင်တော့ သည်အချိန်မှာ အမျိုးသမီး တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ ခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရပ်ဆိုင်းသွား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုတ်တရက် သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
သိပ်သေချာတဲ့ အချက်တစ်ချက်က အမျိုးသမီးအများစုအတွက်က အစေ့ကို မပြတ် လှုံ့ဆော် မပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင် ပြီးဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ပြီးချင်ရင်၊ ပြီးစေချင်ရင် အမျိုးသမီးက အပေါ်ကနေတဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဒါမှ သူ့ကိစ္စအတွက် သူ့ဘာသာ လိုသလို ချိန်ညှိလို့ ရနိုင်သလို အစေ့နဲ့ အမျိုးသားရဲ့ ငယ်ပါအရင်း ဆီးခုံ အောက်နားက အသားနဲ့ မပြတ်ထိတွေ့အောင်လည်း ကြံဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သည်လောက်ဆိုရင် အမျိုးသမီး ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လိုတာထက် ပိုပြီး အတော်လေး ပြည့်ပြည့် စုံစုံ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ATK's Explcit Blog
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ၁၀၀တွင် ငါးဦးမှ ၁၂ဦးသည် စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး ၄င်းတို့အနက် ငါးရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ စနစ်တကျ ဆေးကုသမှုကို ခံယူကြကြောင်း သိရသည်။ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများ စနစ်တကျ ရောဂါကုသမှု ခံယူမှုနည်းခြင်းမှာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်မှန်းမသိခြင်းနှင့် ဖြစ်မှန်းသိသော်လည်း စိတ်ရောဂါဟု ယူဆကာ လူသိမခံလိုသောကြောင့် ဆရာဝန်များထံ သွားရန် ၀န်လေးနေကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက စိတ်ရောဂါဟာ ရူးခြင်းမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်လူတိုင်း စိတ်ညစ်၊ စိတ်ကျဖြစ်ဖူးသူတွေ ချည်းပဲ။ စိတ်ကျရောဂါဆိုတာက ပုံမှန်စိတ်ကျတာထက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပိုကျတာပဲရှိတယ်။ လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)ရန်ကုန် စိတ်ကျန်းမာပညာဌာန၊ ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဝင်းအောင်မြင့်က ပြောသည်။
စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများအနေဖြင့် စနစ်တကျ ဆေးကုသမှု ခံယူပါက လူ၁၀၀တွင် ၇၀၊ ၈၀ခန့်သည် တစ်လအတွင်း လူကောင်း ပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ၂၀၊ ၃၀ခန့်မှာမူ ထို့ထက်ပို၍ အချိန်ယူကုသရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
“စိတ်ကျန်းမာရေး စီမံချက်အနေနဲ့ကလည်း မြို့နယ်အဆင့်နဲ့ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို သင်တန်းပေးနေပေမယ့် ခက်တာက ရောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေက လာမကုကြတာ”ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုနှုန်း များပြားလာသည့်ကို နေ့စဉ်သတင်းစားများတွင် ရက်ခြားဆိုသလို တွေ့နေရသည်။ ကြိုးဆွဲချ သတ်သေသူက အများစု ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့တစ်လေကတော့ တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချတာတို့ ပိုးသတ်ဆေး သောက်တာတို့ ဖြစ်ကြသည်။ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ခြင်း၊ မိသားစု အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေခြင်းတို့က အခြေခံ အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်လိမ့်မည်။ တချို့ကလည်း စိတ်ရောဂါအခံရှိသူတွေ ဖြစ်ကြသည်။ မနုဿတဘာဝေါ၊ ဒုလ္လဘော၊ လူ့ဘ၀ဟူသည် ရခဲလှပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို စိတ်ကျေဝဒနာ ခံစားနေရပြီဟု ထင်လျှင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် စိတ်ရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပြသတိုင်ပင် ကုသသင့်ပါသည်။ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာလျှင် မလိုလားအပ်သော ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုများလည်း နည်းပါးသွားလိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
အောင်လံမြို့တွင် မြစ်ရေ ထပ်မံတိုးလာ စာသင်ကျောင်းနှင့် လူနေအိမ်များ ရေလွှမ်း
အောင်လံ၊ စက်တင်ဘာ ၁၈။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ထပ်မံတက်လာသောကြောင့် လူနေအိမ်(၂၀၀)ကျော်ခန့်နှင့် မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း ရေလွှမ်းသဖြင့် ပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့ကထက်(၈)လက်မလောက် ထပ်တိုးလာတော့ ကျွန်တော်တို့ အပိုင်းမှာတင် အိမ်ခြေ (၁၀၀)လောက် ရေ၀င် ကုန်ပြီ” ဟု သရက်တောရပ်ကွက်နေ ပြည်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် စက်ရုံရပ်ကွက်နှင့် ရွာထောင်ရပ်ကွက်တို့တွင်လည်း ကမ်းနားတန်းနေအိမ်များ ရေလွှမ်းမှုမှာ ပိုမို တိုးလာနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ရေ တက်လာမှုကြောင့် ကန်ကြီးရပ်ကွက်ရှိ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ယမန့ကပိတ် ထားရသည့်အပြင် သရက်တော ရပ်ကွက်ရှိ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းနှင့် အ ထ က(၂) အထက်တန်းကျောင်းမှာလည်း စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
“ရေက တစ်ရက်အတွင်းကို တော်တော် တက်တာ တက်နှုန်းအရမ်းမြန်တယ်။ ကျောင်း ဘောလုံးကွင်းထဲတော့ ရေတွေရောက်ကုန်ပြီ။ နောက်နေ့ ထပ်တိုးလာရင်တော့ ကျောင်းပိတ်ရမှာ” ဟု အထက(၂)မှ ဆရာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေလွှမ်းသောနေ အိမ်များမှ မိသားစုများကို မူနီးစပ်ရာ ဓမ္မာရုံများ၊ လမ်းဘေးများနှင့် ဘုရားဇောင်းတန်းများတွင် ခေတ္တနေရာ ချထားပေးကြောင်းလည်း ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under မိုးလေ၀သသတင်း | No comments
နာဆာဂြိုလ်တုမှ တိုင်းတာချက်များ အရ စက်တင်ဘာလတွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန် တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်း မြောက်ပိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း၊ ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ မန်္တလေးတိုင်း အလယ်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းတို့တွင် မိုးရေချိန် ၁ဒသမ၄ လက်မ (၃၅ မမ ) အထက် မိုးရေချိန် ကျော်လွန်ပြီး ရွာသွန်းသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒဌာနမှ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများကြောင့် မြို့နယ်အလိုက်တွင်ရှိသော မြစ်များ၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်များကို တိုင်းထွာချက်များ ပြုလုပ်ပြီး ၂၄ နာရီနှင့် ၄၈ နာရီအတွင်း သတင်းစာများ၊ ရေဒီယိုများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် အချိန်မီသတိပေးချက်များ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း မိုးလေ၀သဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်တင်ရီကပြောသည်။
“မိုးသည်းထန်စွာရွာရင် ဒေသအလိုက် ရေကြီးရေလျှံမှုတော့ဖြစ်ကြမှာပါ။ မိုးသည်းထန်စွာရွာတဲ့ အတွက် မြစ်ရေကြီးမှုတွေ ကို မြို့နယ်အလိုက်မှာ မြစ်တွေရဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ် ရောက်ရှိနေတဲ့ မြို့တွေကို ထုတ်ပြန် ကြေညာပေး ပါတယ်။ မြို့နယ်အလိုက်မှာ မြစ်ရေကြီးမှုတွေကတော့ တစ်ပတ်လောက်ဆက်ပြီး ရှိနေအုံးမှာပါ” ဟု ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
သမ္မတအမည်သုံး၍ သိန်း ၂၀ လိမ်လည်
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇
နိုင်ငံ တော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ ဆုချီး မြှင့်မည်ဟု လိမ်လည်ကာငွေ တောင်းခဲ့မှုကြောင့် ကျပ်သိန်း ၂၀ အလိမ်ခံရမှု ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြသောက် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လိမ်လည် ခံရသူ ကာယကံရှင်၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ လိမ်လည်တောင်းယူပုံမှာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် လိမ် လည်ခံရသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ ပထမဆုရနေသဖြင့် သမ္မတကြီး မှ ဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကာ ရန်ပုံငွေ အဖြစ် သိန်း ၂ဝကို အရင်ပေးထားရန် အစရှိ သောပုံစံမျိုးဖြင့် တောင်းယူခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁/ပဏက(နိုင်)၀၅၇၉၁ဝကို ကိုင်ဆောင်သူ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ နယ်ရှိ မြသောက်ကျေးရွာနေ ဒေါ်သန်းသန်းနု ၏ဟန်းဖုန်း ဝ၉ ၄၉၆၇၈၅၀၅ သို့ မှတ်ပုံတင်အ မှတ် ၁၂/သကတ(နိုင်)၁၇၁၈၁၃ ကိုင်ဆောင်သူ ဦးသိန်းညွန့်ဆို သူက ဝ၉၄၄၂၀၀၀၇၄၀ နံပါတ် ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၁ဝရက် နံနက် ပိုင်းတွင် ဖုန်းဝင်လာပြီး တစ်ဖက် မှ ဖုန်းပြောသူ မှာ နေပြည်တော် မှ တိုင်းမှူးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ် သန်းသန်းနု၏ ဖုန်းနံပါတ်မှာ မြန် မာနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်သည့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် ပထမ ဆုရနေသဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီး ဦးသိန်းစိန်က ပထမဆုရနေ သည့် အဆိုပါ ဖုန်းပိုင်ရှင် ကို ကျပ် သိန်းတစ်ထောင် ဆုချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ၏ချီးမြှင့်ငွေ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်ကို ဒေါ်သန်းသန်းနု ထံ မလွှဲပို့မီ နောက်လချီးမြှင့်မည့် သူများအတွက် ရန်ပုံငွေအဖြစ် သုံးစွဲ မည့် ကျပ်သိန်း၅ဝကို ဒေါ် သန်းသန်းနုအနေဖြင့် ဖုန်းပြောသူ ထံ လွှဲပို့နိုင်မည်လားဟု မေးမြန်း ကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်သန်းသန်းနုကလည်း ကျပ်သိန်း ၅၀ လွှဲပို့ရန်မရှိသဖြင့် ကျပ်သိန်း ၂ဝသာ လွှဲနိုင်မည်ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ် သန်းသန်းနုလွှဲပို့နိုင်မည့် ငွေကျပ် သိန်း ၂ဝကို ချက်ချင်းလွှဲပေးရန် နှင့် ယခုကိစ္စကို မည်သူ တစ်ဦးတစ် ယောက်ကို မျှ မပြောရန်လိုကြောင်း၊ ပြောမိပါက တခြားဖုန်းရှိသူများ ကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကို သူတို့အားလည်း ဆုချီးမြှင့်ပေး သင့်သည်ဟု တောင်းဆိုလာနိုင် သည့်အတွက် ပြဿနာများဖြစ်လာ နိုင်သည်ဟု ဦးသိန်းညွန့်ကပြော ကြားခဲ့ ကြောင်း ဒေါ်သန်းသန်းနု က ရှင်းပြသည်။
''တိုင်းမှူးကြီးက ကိုယ့်ကို ဖုန်းဆက်လာတော့ ကျွန်မလဲမယုံ နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့သမ္မတကြီးကိုယ် တိုင်ကလဲ ကိုယ့်ကို ဆုချီးမြှင့်ပေး မယ်ဆိုတော့ယုံလိုက်တယ်။ အဲဒါ နဲ့ သူလွှဲခိုင်းတဲ့သိန်း၅ဝကို မတတ် နိုင်ဘူး။ သိန်း၂ဝပဲ တတ်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ရွာကနေ စစ်တွေကိုသွားပြီး လက်ဝတ်လက်စားတချို့ကိုပေါင် ပြီးတော့ ကျပ်သိန်း၂ဝအတိကို စစ်တွေရိုးမဘဏ်ကတစ်ဆင့် လွှဲ လိုက်တယ်'' ဟု ဒေါ်သန်းသန်းနု ကဆိုသည်။
ယင်းငွေ ကျပ်သိန်း ၂ဝကို စစ်တွေရိုးမဘဏ်မှ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၂၉ မိနစ် တွင် လွှဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးသိန်း ညွန့်ဆိုသူက ရန်ကုန်၊ မင်္ဂလာဈေး ရှိ ရိုးမဘဏ်ဘဏ်ခွဲမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ မိနစ် ၅ဝတွင် ထုတ်ယူသွား ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ထုတ်ယူအပြီး တွင် ဦးသိန်းညွန့်ကို ဒေါ်သန်းသန်း နုကပြန်လည်ဆက်သွယ်ရာ ဆက် သွယ်၍မရတော့ကြောင်း၊ ယင်း နောက်ပိုင်းမှ မိမိမှာလိမ်လည်ခံ ရခြင်းဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုက်ရ ကြောင်း ဒေါ်သန်းသန်းနုက ပြော သည်။
''ကျွန်မလဲ ဘာလုပ်လို့ ဘာ ကိုင်ရမှန်းကို မသိတော့ပါ ဘူး။ စားလဲမဝင်၊ အိပ်လဲမပျော်။ ဒီလို မျိုးလဲ တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ကြား လဲမကြားဖူးဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီ လူကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့ တွေ့ချင် နေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ တွေကိုလဲ ပြန်ရ ချင် တယ်''ဟု ယင်း က ဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းနှင့်အလားတူဖြစ်ရပ် မျိုးအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မလှိုင်မြို့နယ်နေသူတစ်ဦးကိုလည်း စက်တင်ဘာ ၁၃ရက် နေ့လယ်ပိုင်း က ယင်းကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီးအမည် အလွဲ သုံးစား လုပ်၍ ဖုန်းဆက်လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူ့ကို ဒီနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က လက်ရှိ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရကနေ ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံး အမှတ် (၂) ကနေ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် ပြစ်ဒဏ် ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အဆင့်မြင့်ဆုံး တရားရုံးကနေ ပြန်လည် ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲပြီး ထောင်တစ်သက်ကနေ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာ
အွန်လိုင်းမှာ ပုံတွေ တင်နေတဲ့ အလှဆုံးအမျိုးသမီး
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
အမေရိကန် အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးသူ၊ သရုပ်ဆောင် ဘီရွန်ဆေး (Beyoncé)က အခုတလော အွန်လိုင်းမှာ ပုံတွေ အဆက်မပြတ် တင်နေပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အားလပ်ရက်ခရီးအတွင်း အပျော်တမ်းရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း Instagram နဲ့ Tumblr တို့ကနေ ဓာတ်ပုံတွေကို အများသိအောင် ရှယ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ကမ္ဘာကျော် People မဂ္ဂဇင်းက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ အလှဆုံးအမျိုးသမီး (World's Most Beautiful Woman) အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
ကဲ ... ကမ္ဘာ့ အလှဆုံးအမျိုးသမီးရဲ့ ပုံတချို့ကို သူ့ရဲ့ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများကနေ ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခိုးရာပါ လက်နက်များနှင့် ခိုးယူခဲ့သူများအား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under မှုခင်း | No comments
စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ည ၉ နာရီ ၂၅ မိနစ်က မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ ရဲတပ်ရင်း (၃ဝ)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များက လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက် မြို့သစ်ကြီး ရပ်ကွက် အုပ်စု အေးမြသာယာ ရပ်ကွက် စက်မှုလယ်ယာ မြို့ပတ်လမ်းဆုံ ၌ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာ တက်တိုး မောင်းနှင်ပြီး သန်းကျော်ဌေး လိုက်ပါ စီးနင်း လာသည့် ရှာယန်း ၁၂၅ ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့် စစ်ဆေးရာ ၄င်းဆိုင်ကယ် တူးဘောက် အတွင်းမှ ဒဿမ ၆၂ မမ ပစ္စတို (၁)လက် ၊ ကျည်အိမ် (၁)ခု နှင့် ကျည်ဆံ (၇)တောင့်အား ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း ရမိကာ ၄င်းတို့၏ ထွက်ဆိုချက် အရ ကန်ပိုက်တည် မြို့နယ်ခွဲ စင်ကြိုင် ကျေးရွာ အမှတ်(၁ဝဝ၃) နယ်ခြား စောင့်တပ် တွင် ဖိုးချို(ခ)သန်း နိုင်ထူး နှင့် လမ်းခင်းရန် ကျောက်ထု၍ ကျောက်စုသည့် အလုပ်အား လုပ်ကိုင်စဉ် စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် တပ်အတွင်းမှ လူမနေသည့် နေအိမ်၌ သံသေတ္တာ အား ဖောက်ထွင်းကာ သေတ္တာ အတွင်းမှ ဒဿမ ၆၂ သေနတ် (၄)လက် ၊ ကျည်အိမ် (၅)ခု ၊ ကျည်ဆံ (၄၅)တောင့် အား ခိုးယူ ခဲ့ကြောင်း ၊ ကျန် ရှိလက်နက် နှင့်ခဲယမ်း ကျည်အိမ် များအား တက်တိုး ၏ နေအိမ်၌ လျှို့ဝှက်စွာ သိမ်းဆည်း ထားကြောင်း အစစ်ဆေးခံ၍ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး လှရီ ၊ မြို့မ ရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး မိုးဇော် နှင့် နယ်ထိန်း ခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ် သက်ဇော်ဦး တို့ ပါဝင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင် များက တက်တိုး ၏ နေအိမ် ကွပ်ပစ်အောက်၌ လျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်း ထားသော ကျန်ရှိသော သေနတ် (၃)လက် ၊ ကျည်အိမ် (၄)ခု ၊ ကျည် (၃၈)တောင့် တို့အား ထပ်မံ၍ ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖိုးချို၏ ထက်မံ ထွက်ဆိုချက် အရ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီ အချိန်တွင် မြစ်ကြီးနား ခရိုင် အထူး မှုခင်း နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ဖိုးချိုအား ခေါ်ဆောင်၍ မြစ်ကြီးနားမှ ဆဒုံးမြို့နယ်ခွဲ သို့ သွားရောက်ကာ နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူ ဖိုးချို ၏ ပြောပြချက် အရ ခစတ(၁ဝဝ၃) (စင်ကြိုင်) တပ်စခန်း မြောက်ဘက် (၄) ဖာလုံခန့် အကွာ ဆဒုံး မှ ကန်ပိုက်တီ ကားလမ်း ယာဘက် အခြမ်း မြေထိန်းနံရံ အထက်ရှိ ကျောက်တုံးများ အကြား လျှို့ဝှက် သိမ်းဆည်း ထားသော A. bb 718 နံပါတ်ပါ Webley အမျိုးအစား ခြောက်လုံးပြူး သေနတ် (၁)လက် ၊ 0.38 BPL တံဆိပ်ပါ စတီးရောင် ခြောက်လုံးပြူး ကျည် (၁)တောင့် ၊ .၃၂ ပစ္စတို ကျည်အိမ် (၁) ခုတို့အား ထပ်မံ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း နှင့် တက်တိုး ၊ သန်းကျော်ဌေး နှင့် ဖိုးချို တို့ ၃ ဦးအား လက်နက် ခိုးယူ ကိုင်ဆောင်ကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိ ရ၍ မြစ်ကြီးနား မြို့မ ရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၆၄/ ၂၀၁၃ လက်နက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (ခ) အရ အမှုဖွင့် အရေးယူ ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
From: Pyi Chit Thar
MMSD Smart Zawgyi V1.2 (Smart Zawgyi Font Installing)
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under နည်းပညာ | No comments
အရင် version v1.0 မှာမရတဲ့ ဖုန်းတွေကိုထက်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်
iMobile istyle များနှင့် တရုတ်ဖုန်းများအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
Root Access ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Font Changer ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Restart ချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သူ့အလိုလိုတော့ Restart ကျသွားအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်. . .
တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ Font Change ပြီးပြီးခြင်း တရုတ်စာတွေတက်လာပေမဲ့
Restart ချပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်. . .
မည့်သည့် Font မှမပျက်ပါဘူး
Frozenkeyboard v1.1.3 တစ်ခါထဲထည့်ပေးထားပါတယ်။
လူထုစည်းရုံးရေးခရီးလှည့်လည်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးနင်းလာသည့်ကား (အ/၅၄၁၅) ပါဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်တန်း၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျီတောက်ပေါက် ကျေးရွာ အနီးသို့အရောက်တွင် မော်တော်ကားဖြင့် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသူ အချို့အား တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - burmalibrary.org)
လူထုစည်းရုံးရေးခရီးလှည့်လည်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးနင်းလာသည့်ကားပါဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်တန်း၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျီတောက်ပေါက်ကျေးရွာအနီးသို့အရောက်တွင် ဆန့်ကျင်အော်ဟစ်နေကြသူအချို့အား တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - burmalibrary.org)
လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ ဖြိုးမှုဌာန (ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ်) တွင် နိုင်ငံခြား ဘာသာ စကား ညနေ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဖွင့်လှစ်မည့် ဘာသာစကား သင်တန်းများမှာ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ် (ဘာသာပြန်၊ စကားပြန်)၊ ဂျာမန်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ ထိုင်းနှင့် မြန်မာ (နိုင်ငံခြားသားများ အတွက် သီးသန့်) တို့ ဖြစ်သည်။
သင်တန်းသို့ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်တွင် စတင်လက်ခံမည်ဟု သိရပြီး နောက်ဆုံး လက်ခံမည့်နေ့မှာ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သင်တန်းသားဦးရေ ပြည့်ပါက လျှောက်လွှာ လက်ခံမည် မဟုတ်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများ အနေဖြင့် ဖုန်း-၀၁-၅၁၄၃၇၂ (လိုင်းခွဲ-၈၀၉) သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်သည်။
အိမ်အကူအလုပ်သမ ၂ ဦးလွတ်မြောက်ပြီ
လေးလကြာအိမ်အကူအဖြစ် အခန်း ပိတ်လှောင်ခိုင်းစေခံနေခဲ့ရ သည့် မြန်မာအလုပ် သမ ၂ဦး ယနေ့တွင် MAT အဖွဲ့၏ ကူညီမှုဖြင့် လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသူများမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ရွှေဘော်ကုန်းကျေး ရွာမှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မအေးမြသူနှင့် သထုံမြို့နယ် သမ္ပာန်ကျေးရွာမှ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မစမ်းဝင်း တိုဖြစ်ကြသည်။
ဘန်ကောက်မြို့တွင် အိမ်အကူလုပ်သူ မမြင့်စန်း က ဘန်ကောက်မြို့ ဘန်ဘော်(၅)မှ မုန့်လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် တစ်ဦး အိမ်သို့ တစ်လလျှင် ဘတ်ငွေ ၅,၅၀၀ ရမည်ဟု ဆိုကာ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မမြင့်စန်း နှင့် မအေးမြသူ ၏ မိခင်တို့မှာ ရင်းနှီးသူများဖြစ်သဖြင့် အခကြေးငွေ မယူပဲ အလုပ်ရှာပေး ခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
မေလ၂၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည့် အလုပ်သမများမှာ ယနေ့နံနက် ၆နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ခြံကိုကျော်တက်လျှက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT ရုံးသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ ကာယကံရှင်များက ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်အားခများရရှိရန် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားလိုမှုမရှိတော့ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
Samsung Firmware/flash file tar.md5 ဖိုင်တွေဖြည်ချင် ပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက်
Samsung Firmwrare/flash file Tar.md5 ဖိုင်တွေဖြည်ချင်ပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက် အလွယ်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်မယ့်နည်းပါ။ TAR.MD5 Packager ကိုအသုံးပြုလုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဒီ Tool က tar.md5 ဖိုင်တွေကို extract လုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သလို tar.md5 ဖိုင်အဖြစ်ပြန်ပေါင်းဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီ Tool မှာအဓိကအနေနဲ့ Option သုံးခုပါဝင်ပါတယ်။
Select option [3. Extract ROM] – for extract pars of rom into folder \_parts
Select option [1. Make TAR] – for packing CSC.tar
Select option [2. Add MD5 to TAR] – for convert .tar to .tar.md5
ဖုန်းကလိသူတွေအတွက် TAR.MD5 Packager ဟာ Windows ပေါ်မှာတင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်အသုံးဝင်တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
TAR.MD5 PACKAGER ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
TAR.MD5 PACKAGER အားရယူရန်
Ref: XDA Developer Forum
Posted by drmyochit Wednesday, September 18, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
၅. အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝတ်ဆင်ပါက မကောင်းသော အကြံအစည်များ မဝင်ရောက်စေခြင်း၊ အန္တ ရာယ် တစ်ခုခု ကြုံတွေ့ခါနီးတွင် သတိပေးတတ်ခြင်း (ကျောက် အရောင်ပြောင်း သွားခြင်း၊ ဖျော့သွားခြင်း) စသည့် အစွမ်းသတ္တိများ၊ အကျိုးထူးများ ပေးတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြကျောက်ဟာ ဝတ်ဆင်သူကို ကောင်းကျိုးတွေပေးတတ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြကြီးကိုဝယ်ပြီး လည်ပင်းမှာ ချိတ်ထားလိုက်ရရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပြီး ဒီနေ့ကစလို့ တစ်ရက်ကို တစ်ကျပ် ပိုက်ဆံ စုပါတော့မယ် တိန် :P :P
ခုလက်ရှိ ပိုင်ရှင်ကတော့ Regan Reaney ဖြစ်ပြီး အချို့ကတော့ ၄င်း မြကြီးကို အရောင်သွင်း ပြုပြင်ထားတယ်လို့ ပြောကြတဲ့အတွက် ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Regan Reaney ကတော့ သူ့ကျောက်ကို မည်သူမဆို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်လို့ အာမခံထားပါတယ်။ ဖရဲသီးတစ်လုံး အရွယ်ခန့် ရှိတဲ့ ၄င်း မြကို ဘရာဇီးနိုင်ငံကနေ တူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁.၅ပေါင် အလေးချိန် ရှိတဲ့ ၄င်းမြဟာအရိုင်းတုံးအဖြစ် ထွက်ရှိပြီးသမျှ မြ တွေထဲမှာ နံပါတ်-၅ အကြီးဆုံးဖြစ်ပေ မဲ့ ဖြတ်တောက်ပြီး သွေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ယခုတွေ့မြင်ရတဲ့ Teodora ကသာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဖြစ်လာပါတယ်။ Regan Reaney က ၄င်းမြကြီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက သူဌေးကြီးတစ်ဦးဆီက တဆင့်ပြန်လည်ဝယ်ယူတာဖြစ်ပြီး ၄င်းနာမည်ကို ဖော်ပြဖို့တော့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (MBOA) မှ ကြီးမှူးပြီး မန္တလေး MRG မိုဘိုင်းဖုန်း အထူးပြုပြင်နည်း သင်တန်းကျောင်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာများမှ မိဘမဲ့ ကလေးများ အတွက် မိုဘိုင်းပြုပြင်နည်းသင်တန်းအား ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အခမဲ့ သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းအား မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်နှင့် မိဘမဲ့ကျောင်း သားများ ဘဝအာမခံချက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး MRG မှ သိရသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းသို့ မန္တလေးနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ မည်သည့်မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာများမှ မိဘမဲ့ ကလေး မဆို တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလိုသူသည် သင်တန်းအပတ်စဉ် တစ်ခုအတွက် သင်ရိုးတစ်ခုစီ ကိုသာ လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ကာ သင်ရိုးနောက်ထပ် တစ်ခုကိုလည်း ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့်ပေး မည်ဟု သိရသည်။ လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် အနည်းဆုံးပညာအရည်အချင်း အလယ် တန်း အဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ တစ်စောင်၊ CV Form၊ Passport3ပုံ၊ သက်ဆိုင်ရာ မိဘမဲ့ဂေဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ (MBOA) တည်ရှိရာ မူလငါးစို့တိုက် ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ကျောင်းတိုက်၊ လမ်း (၃၀ x ၆၂) ထောင့်၊ မန္တလေးမြို့၊ ဖုန်း-၀၉-၉၁၀၀၅၉၃၅ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
ဆီးရီးယားစစ်တပ် ရဟတ်ယာဉ်ပိုင်းလော့ကို သူပုန်တပ်မျာ...
တပ်မတော်ကြောင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ဘယ်လောက် ထိခ...
အင်တာနက်ဆိုင်အချို့ ညစ်ညမ်းကားများ အလွယ်တကူကြည့်နု...
ဗြိတိန်မှ မင်္ဂလာမောင်နှံအတွက် အမှတ်ရစရာ ဖန်တီးပေးခဲ...
ဒိန်ချက် အမက(လွန်)မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ KIA အရာရှိတစ်ဦး...
ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ချင်း ရောင်းလျှင် ရန်ကုန်တွင် ဖမ်းမ...
အောင်လံမြို့တွင် မြစ်ရေ ထပ်မံတိုးလာ စာသင်ကျောင်းနှ...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ဂျာမတ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး သေဒဏ...
ခိုးရာပါ လက်နက်များနှင့် ခိုးယူခဲ့သူများအား ဖမ်းဆီ...
MMSD Smart Zawgyi V1.2 (Smart Zawgyi Font Installi...
ကျိုက်ထီးဆောင်းဆရာတော် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူမည...
Samsung Firmware/flash file tar.md5 ဖိုင်တွေဖြည်ချ...
မြကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ထားမယ် ဆိုရင် အကျိုးပေးတတ်ပုံမျာ...
လူမဆန်မှုတွေ မြောက်ကိုရီးယား ကျူးလွန်ဟုဆို
မန္တလေး ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာ ရေကြီး (ရုပ်/သံ)
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်...
အရပ် ၇ ပေ ၁၀ လက်မရှိ ကိုဝင်းဇော်ဦးတွင် ဦးနှောက်အကျ...
လမ်း ၄၀ မှာ အ၀တ်လှန်းရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပြုတ်ကျေ...